SMPTE IHollywood ukubamba uRob Hedrick weNational Hot Rod Association ku- “Meet an Industry Innovator” Webinar | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » SMPTE Hollywood ukubamba uRob Hedrick weNational Hot Rod Association ku- “Meet an Industry Innovator” Webinar
SMPTE Hollywood ukubamba uRob Hedrick weNational Hot Rod Association ku- “Meet an Industry Innovator” Webinar
Umcimbi wamahhala uzohlola ukuhamba komsebenzi wokubambisana okukude okusetshenziselwa ukubuyisela umjaho wokuhudula ubuyele kuFox Sports.
E-LOS ANGELES - The Hollywood Isigaba seNhlangano Yezithombe Zamafilimu Nama-Television® (SMPTE®), izoveza ukuthi iNational Hot Rod Association ikubuyise kanjani ukusakazwa bukhoma kwemicimbi emikhulu yokujaha umjaho — ngokuphepha nangokuvikelekile — kowokuqala ochungechungeni lwe-webinar olusha lwe- “Meet an Industry Innovator”. Umcimbi wamahhala uhlelelwe umhlaka-24 Septhembath.
Njengoba ihlehlise isizini yayo ngoMashi ngenxa ye-COVID-19, iNHRA ibuyele emjahweni ngemicimbi emithathu e-Indianapolis Motor Speedway ngoJulayi nango-Agasti. Ukwenza lula ukusakazwa kwemicimbi yeFox, uRob Hedrick, umqondisi we-NHRA wezokukhiqiza ngemuva kanye nokukhiqiza abakhiqizi, kanye nethimba labasakazi be-NHRA basungula uhlelo lokuhamba komsebenzi Sony, I-NewTek nobuchwepheshe beGrass Valley kanye nesikhulumi sokusebenzisana esikude seBeBop, ukuvumela iqembu labasakazi ukuthi baqhubeke nomsebenzi wabo ngenkathi bethobela imihlahlandlela yokuqedwa kwezenhlalo.
Kwa-NHRA, uHedrick uhola iqembu elenza okuhanjiswa kweFox Sports nesikhulumi senhlangano i-OTT, asize ekusunguleni. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yesipiliyoni sethelevishini, uphayone ukusakazwa bukhoma kusukela ngo-2004 ethula bukhoma izindaba ezithinta izindaba nezehlakalo zesimo sezulu kubandakanya neSiphepho uKatrina. Kusukela ubhadane, uRob uguqule indawo yakhe yokuhlala maphakathi nedolobha e-Los Angeles kuhlelo lokuhlela online ukusekela kude i-NHRA kuthelevishini ye-FOX.
UGreg Ciaccio, uthishanhloko we- [VIZN] Consulting, uzolinganisa. UCiaccio nguchwepheshe wobuchwepheshe onothando lwezisombululo zobuchwepheshe nezokuhamba komsebenzi. Uke wasebenza ezikhundleni eziphezulu zokuphatha ukusebenza eSim, Ascent, Technicolor naseDeluxe. Usize ukwethula imikhiqizo nezinsiza ezihola phambili kufaka phakathi i-Technicolor's DP Lights kanye nezixazululo ze-dauxes eziseduze ne-Deluxe. Usebenza njengoSihlalo we-ASC Motion Imaging Technology Council's Workflow Committee, efaka ama-ACES nama-Advanced Data Management Subcommittee. Ngokwengeziwe, uyilungu leBhodi le- SMPTE Hollywood Isigaba, ilungu le-ASC Associate kanye nelungu elisungula le-Digital Cinema Society.
SMPTE HollywoodAma-webinar ka "Meet an Industry Innovator" akhululekile futhi avulekele umphakathi. Ukubhaliswa kwangaphambili kuyadingeka.
Izinkundla: SMPTE Hollywood Hlangana ne-Industry Innovator: INational Hot Rod Association Ishaya emuva ibuyela endaweni yokuqala
Nini: NgoLwesine, Septhemba 24, 2020. Emini iPST
Mayelana nalokho SMPTE® Hollywood kwesigaba
The Hollywood Isigaba SMPTE® ekuqaleni yahlelwa njengeSigaba seNxweme eNtshonalanga ku-1928. Namuhla, njengeyakhe SMPTE Isifunda, sihlanganisa okungaphezulu kwe-1,200 SMPTE Amalungu anesithakazelo esifanayo kwezobuchwepheshe bokuhamba-phambili ku-Greater e-Los Angeles indawo. I Hollywood Isigaba sinikeza imihlangano yamahhala ngenyanga evulekile SMPTE Amalungu nabangewona amalungu ngokufanayo. Ulwazi mayelana nemihlangano ithunyelwe kwiwebhusayithi yeSigaba ku www.smpte.org/hollywood.
I-Society of Motion Photo neTelevishini Engineers®, noma SMPTE, ichaza ikusasa lokuxoxa izindaba. Umsebenzi weNhlangano ukunika amandla uhlaka lobuchwepheshe oluvumela umphakathi wobungcweti bomhlaba wonke ukwenza abezindaba ngezinjongo zobuciko, zemfundo kanye nezokuzijabulisa nokusabalalisa lokho okuqukethwe ukuze kusizakale futhi kujabulise abantu emhlabeni wonke. Njengomphakathi oqhutshwa ngokuzithandela womhlaba wonke wochwepheshe, onjiniyela, nabadali, SMPTE ubandakanyeka ekushayeleni ikhwalithi nokuziphendukela kwemifanekiso yezithombe ezinyakazayo, ithelevishini nabezindaba zobuchwepheshe. Inhlangano ibeka amazinga embonini asiza amabhizinisi ukukhulisa izimakethe zawo ngemali ebiza kakhulu, ihlinzeka ngemfundo efanelekile esekela ukukhula kwamakhono kwamalungu, futhi igqugquzela umphakathi wobulungu obuhlanganyele.
Imininingwane yokujoyina SMPTE iyatholakala at smpte.org/join.
Zonke izimpawu zokuhweba ezivela lapha yizakhiwo zabanikazi abafanele.
Yokusakaza imicimbi yemboni SMPTE Ezemidlalo Ukuhamba komsebenzi 2020-09-15
Ngaphambilini: I-TAG Ingeza Isici Sokuqapha Esiguqulwayo Sokusebenza Kwezinga Elilandelayo Ekuqapheni Okuminyana Kakhulu
Olandelayo: I-Apantac Debuts UHD Universal Scaler ye-OpenGear Platform